आफ्नो प्रेम साँचो हो की झुटो ? यसरी थाहा पाउनुहोस्… « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
आफ्नो प्रेम साँचो हो की झुटो ? यसरी थाहा पाउनुहोस्…
११ पुष २०७५, बुधबार १२:३२ मा प्रकाशित
तर, यसरी बोलेका सबै कुरा साँचो हुने भए किन कसैको प्रेमसम्बन्ध टुट्थ्यो होला र ? त्यसैले प्रेमीले भनेका सबै शब्दमा आँखा चिम्लेर पूर्णरुपमा भरोसा गर्न हुँदैन र सबै प्रेम चोखो पनि हुँदैन । कसैले आफ्नो शारीरिक सुख भोगको लागि पनि प्रेमको नाटक गरेका हुन सक्छन् ।
भनिन्छ, मानिसको मुखले झुटो बोल्न सक्छ तर, शरिरले सक्दैन । हामी कसैसँग आमनेसामने भएर कुराकानी गरिरहँदा मुखले एउटा कुरा बोले पनि ‘बडी ल्यांग्वेज’ ले अर्कै भाव प्रकट गरिरहेको हुन्छ । ‘बडी ल्यांग्वेज’ ले कुनै पनि मानिसको वास्तविक उद्देश्यलाई दर्शाउँछ ।
हुन सक्छ प्रेमीको मिठा र चिल्ला कुराबाट आकषिर्त भएर तपाईं आफ्नो प्रेम सच्चा भएको सोच्नुहुन्छ तर, केही समयपछि नै तपाईंलाई त्यो प्रेम नभई शारीरिक आकर्षण मात्रै भएको थाहा हुन्छ ।
यस्तोमा आफ्नो सम्बन्धबारे गहिरिएर सोच्ने हो भने त्यो साँच्चै प्रेम हो वा केवल शारीरिक आकर्षण भन्ने सजिलै थाहा हुन्छ । त्यसैले तपाईं पनि कसैसँग प्रेममा हुनुहुन्छ वा कसैसँग नजिकिँदै हुनुहुन्छ भने निम्न कुराहरुलाई ध्यान दिनुहोस् ।
कहिलेकाँही तपाईंले कुनै मानिसलाई उनीहरुको बाहिरी सुन्दरताको कारणले पराउनुहुन्छ । तर, त्यस्तो अवस्थामा उसँग प्रेममा परेको भ्रम तपाईंमा पर्न सक्छ, जुन यथार्थ हुँदैन ।
सम्बन्धको वास्तविक पक्षमा ध्यान दिनुहुन्छ
कुनै पनि सम्बन्ध निभाउन सजिलो हुँदैन । हरेक सम्बन्धमा नराम्रो समय आउँछ । तर, तपाईं समस्यालाई कसरी सुल्झाउनुहुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । यदि तपाईं सच्चा सम्बन्धमा हुनुहुन्छ र एक-अर्कालाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने सम्बन्धको वास्तविक पक्षको बारेमा सोच्नुहुन्छ ।
साथै, तपाईर् सम्बन्धलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ । तर जब केवल शारीरिक सम्बन्धको लागि प्रेमको नाटक गरिरहनुभएको छ भने सम्बन्ध मजबुत बनाउने बारेमा होइन बरु आफ्नो स्वार्थको बारेमा सोच्नुहुन्छ ।
यदि तपाईंलाई आफ्नो पार्टनरले पनि सम्बन्धलाई भित्रैदेखि नसोचेको जस्तो लाग्छ भने त्यो सम्बन्धमा आफ्नो समय र प्रेम लगानी नगर्नुहोस् ।